Tonizia : herisetran’ny mpitandro ny filaminana hanaparitahana ny mpanao fihetsiketsehana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2011 14:03 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, বাংলা, Italiano, Ελληνικά, English
Anankiray amin'ireo lahatsoratra manokana mikasika ny Fanoherana tany Tonizia 2011 ity lahatsoratra ity.
Naparitaky ny polisy tamin'ny alalan'ny herisetra ireo mpanao fihetsiketsehana toe anoloan'ny lapam-panjakana tamin'ny 15 jolay lasa teo. Nitaky fanavaozana ireto mpanao fihetsiketsehana ireto ary nikasa hanao sit-in fahatelo tao Kasbah, ivon'ny fanaovana fihetsiketsehana rehetra ao Tunis renivohitra.
Anisan'ny zavatra notakian'ireto mpanao fihetsiketsehana ireto ny fialan'ny minisitry ny fitsarana, izay voalazan'izy ireo fa tsy mahavita azy ary “manome rariny ireo mpamono olona tsy manan-tsiny nandritra ny fanoherana”, ao koa ny minisitry ny atitany, izay efa nitazona andraikitra ambony tamin'ny minisitera maro tamin'ny andron'i Ben Ali.
Polisy any Tonizia. Sary nalefan i Kissa tao amin ny blogspot
Nilanja sora-baventy koa ry zareo ireto nandavany ny fanilihana ny tanora ao amin'ny resaka handraisana fanapahan-kevitra, ary mitaky ny fahaleovantenan'ny fitsarana ihany koa.
Nampiasa baomba mandatsa-dranomaso sy kibay ny polisy hanoherana ireto mpanao fihetsiketsehana ireto tsy hivory sy hanao sit-in. Ao amin'ny twitter, tsy mijanona manaraka ny fizotry ny raharaha any an-toerana ny Toniziana.
@walidsa3d:nanaparitaka ny mpanao fihetsiketsehana tamin'ny baomba mandatsa-dranomaso ny polisy#kasbah3
@tunisien:saika hanao sir-in am-pilaminana ireo Toniziana tezitra kanjo notsenain'ny polisy tamin'ny herisetra. #Kasbah3
Nidiran'ny polisy an-keriny koa ny moske iray ka nokapohiny tamin'ny hazo ireo mpanao fihetsiketsehana niafina tao.
@walidsa3dniditra tao amin'ny moske ao Kasbh ny polisy ary nandroaka ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny hazo#Kasbah3
Nidiran'ny polisy an-keriny ny moske, nokapohiny sy noroahiny ny mpanao fihetsiketsehana niafina tao.
Ny sary miaina manaraka no hahitano ireo mpanao fihetsiketsehana nitady hialoka tao amin'ny moske akaikin'i Kasbah, sady nihira ny “Fidèles au sang des martyrs” (tsy mivadika amin'ny ran'ny maritiora). Sempotry ny baomba mandatsa-dranomaso ny sasany amin'izy ireo.
Nosamborina koa ny mpanao fihetsiketsehana am-polony. Misy hafatra mitaky ny hamotsorana ireo rehetra nosamborina ao amin'ny bilaogy Kissa-online:
Takianay ny hamotsorana tsy misy hatak'andro ireo nosamborina rehetra (48 eo ny isany), indrindra ireo blaogera sy mpisera facebook Mohamed Cheyeh, Shadeed Belhaj, ary Haman Allah Mansouri.
efa navostotra ny 26 tamin'ireo nosamborina, 20 no hiakatra fitsarana ary 35 no hampidirina ho ao amin'ny tafika hanao raharaha miaramila.
Ity herisetra nampiharin'ny polisy ity no nahatonga ny blaogera toniziana hilaza fa mampahatsiahy azy ireo ny zava-nisy tamin'ny fanjakana teo aloha izao zavatra izao. Indreto ny santionany amin'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny twitter.
#Kasbah3 Tsy zavatra goavana akory (olona 300)! Tsy mankasitraka iny fanaovana fitokonana mipetraka iny aho kanefa tsy tiako koa ny herisetra nataon'ny polisy.
Tsy azon'ny polisy tsara angamba fa efa nialana ny fanjakan'ny polisy. #Kasbah3
Raha tsy izany, tsy anisan'ny #kasbah3 aho, fa ho ahy manokana dia ilaina ny fanerena an-dalam-be ary tsy misy fanamarinana azo omena ny baomba mandatsa-dranomaso.